इन्स्टाग्राममा सलमान, आलिया, सोनाक्षी र करणका फलोअर तीव्र गतिमा घट्दै, कसको कति घटे? – Jagaran Nepal
इन्स्टाग्राममा सलमान, आलिया, सोनाक्षी र करणका फलोअर तीव्र गतिमा घट्दै, कसको कति घटे?
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आ’त्मह’त्याले बलिउड यतिबेला परिवारवाद र गुटबन्दीका लागि आलोचित भइरहेको छ। यसमा ठूला स्टार र ब्यानरको नाम जोडिएको छ। परिवारवाद र गुटबन्दीको नाममा विशेषगरी यसराज फिल्मस्, सलमान खान, करण जोहर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपुर लगायतका कलाकार र सिनेमा निर्माण कम्पनीको सार्वजनिक रूपमा आ’लोचना भइरहेको छ।